भविष्य | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० फाल्गुन १७, शनिबार ०३:३९ गते
“दिदी ल आउनुस्, आउनुस् । कहाँसम्म जाने हो तपाईं ? ल आउनुस्…टाँडी, पर्सा, भण्डारा ः टाँडी, पर्सा, भण्डारा…,” मेरो आडैमा हतारमा भएजस्तै
गरेर उभिएकी एउटी अर्धबैँसे दिदीलाई गाडीको खलाँसीले एकै सासमा सोध्यो ।
जान त मलाई पनि थियो, तर ती दिदीजस्तो हतारिएको भने
थिइनँ । गाडीमा बस्ने ठाउँ भए जाने, नत्र अर्को गाडी कुरेरै भए पनि सिटमा नै बसेर जाने सुरमा थिएँ म । तर, त्यो खलाँसीको स्वर कताकता चिनेजस्तो लाग्यो । आफूसँग परिचितजस्तै लाग्यो र त्यो सानो मिनी गाडीतर्फ टाउको मोडेँ । मेरो अड्कल सही नै साबित भयो, आखिर त्यो स्वर मसँगै स्कुलमा पढेको साथीको रहेछ । के बोलूँ, के बोलूँ भो…तर गाह्रो भने धेरै समय भएन । उसैले सोध्यो ः
‘कता जान लागेको, सञ्चै
मलाई पनि सजिलो त भयो केही बेरलाई । सजिलै उत्तर दिएँ ः
‘सञ्चै छु, अनि तिमी नि ? दिदीको घर जान लागेको टाँडीसम्म’ भन्दै त्यही गाडीमा जाने सुर गर्दै छिरेँ ।
उसले पनि सञ्चै छु भन्दै मेरो बारेमा चासो राख्दै सोध्न थाल्यो ः
‘के गर्दै छौ आजकल ? पढाइ कहाँ पुग्यो…?’ आदि इत्यादि…
मैले पनि जवाफ त दिएँ, तर उसलाई प्रश्न गर्न र उसका बारेमा जान्न नै गाह्रो भयो । सोधूँ त के सोधूँ, नसोधूँ त के नसोधूँ…! सोध्नलाई मन नभएको पनि होइन, तर किन–किन अप्ठेरो लाग्यो ।
‘अनि तिमीले कता पु¥यायौ पढाइ ? प्लस टु सक्यौ कि नाइँ ?’ यत्ति नै सोधेँ ।
तर उसले त ११ को अन्तिम जाँच नै दिएको रहेनछ । ‘इन्डिया जानुपर्ने भएर जाँच आउने बेलामा त्यतै गएँ, त्यसपछि पढ्न नै छाडेँ’– मन गरूङ्गो पार्दै उसले भन्यो ।
बेकारमा सोधेँ जस्तो भान भो, तर के गर्नु ! नसोधूँ त वास्ता नगरेको जस्तो, सोधूँ त उसलाई पनि अप्ठेरो । जाने बेलामा पनि जाऊ है भन्दै सम्बोधन ग¥यो र मैले भने गएँ है भन्दै गाडीबाट ओर्लिएँ । गाडीमा बसुन्जेल भने उसलाई अरु केही सोध्ने मौका पाइनँ । गाडीमा प्यासेन्जर झार्दै र बोलाउँदैमा उसलाई फुर्सद नै थिएन ।
तर, फुर्सदी भएर घुम्न जानलाई गाडीमा बसेको मलाई भने गाडीमा बसुन्जेल र गाडीबाट झरेर पनि उसका बारेमा सोच्दा समेत नमज्जा लागिरह्यो । आफूसँगै पढेको साथीको त्यो अवस्था देख्दा सबैलाई नरमाइलो त लाग्छ नै । कसले पो सोचेको थियो र, उसलाई कुनै दिन खलासी भएको देख्नुपर्छ भनेर । त्यसमाथि उसले आप्mनो पढाइ पनि छाडेर खलासीका रुपमा आप्mनो भाग्य खोज्दै दिनहुँ हुँइकिरहेथ्यो– टाँडी, पर्सा, भण्डाराको रूटमा…..!
(सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस)
अर्थात् तेस्रो आँखा
साथ जुटेको तर साइत नजुरेको श्री मुक्तिनाथको यात्रा–२